नेपाल प्रहरीका २० प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सरुवा को-काँहा,? – Kantipur Hotline
नेपाल प्रहरीका २० प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सरुवा को-काँहा,?
काठमाडौ फागुन ११, नेपाल प्रहरीका २० प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सरुवा भएका छन । गत सोमबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक सरुवा गरिए पनि आजमात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रहरी उपरिक्षक विश्वराज पोखरेलद्दारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सरुवा विवरण अनुसरा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विजयलाल कायस्थ क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेत त्यस्तैगरि ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत् विभाग र विशेष ब्युरोका प्रमुख बमबहादुर भण्डारीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय,हेमन्तबहादुर पाल विशेष ब्युरो, मिङ्मार लामा ट्राफिक महाशाखा, रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
थप विवरण जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला
महाशिवरात्रि पर्वमा शसुल्क दर्शन र विशेष पासको व्यवस्था खारेज